Accueil > Gazetin'ny nosy > Covid 19 : Rarao ny fivorivoriam-bahoaka !
Covid 19 : Rarao ny fivorivoriam-bahoaka !
Loza efa nihatra teto amin’ny firenentsika ny Covid 19 na inona na inona fanazavana ny amin’ny hoe “tsy tena nandripaka vahoaka an’aliny teto izy io fa nahomby ny fepetra noraisin’ny tsirairay”, dia efa namono olona teto aloha izy io, ary namotika fihariana maro. Noho izany, mba tsy hahavoatery ny mpitondra fanjakana handray fepetra henjana izay mety hamerina ny fahasahiranam-bahoaka toy ny nampiharina indroa miantoana ny fihibohana, ny taona 2020 sy 2021, dia tokony misy fepetra elanelam-panahy ihany hampiharina mba hisorohana ny fiverenan’ny aretina sy ny ho fiparitahany.
Any ampita any dia misy ny firenena iverenan’ny aretina ka mampitsangam-bolo. Isika anefa izao efa manokatra ny sisin-tany ka ahafahan’ny olona avy any ivelany miditra eto sy ny avy eto mivoaka. Ekena fa misy ny fepetra raisina eny ampahatongavana eny Ivato, dia ny fitiliana sy ny fanokana-monina na fihibohana mandritra ny fotoana voafetra. Ny tsy azontsika lavina anefa dia tsy fongana tanteraka akory ny aretina efa nisy teto, ary fantatra fa mbola misy tokoa ny mararin’izany.
Noho izany, ny fepetra elanelam-panahy iray izay azo tanterahina nefa mba malefadefaka ihany ny voka-dratsy aterany raha ny lafiny fidiram-bola no asian-teny, dia ny fandrarana ny fivorivoriana aloha. Manomboka amin’ny famoriam-bahoaka ataon’ny manam-pahefana ara-panjakana io, amin’ireny lanonam-panjakana fitokanana zava-bita ireny, mitohy amin’ny hetsika hafa sy ireo lanonana mbamin’ny fampisehoana an-tsehatra. Ny any ampiangonana dia azo arindra toy ny mahazatra.
Mandrimandry manana aretina isika nefa fantatra fa marefo dia marefo, na eo aza ny kojakoja efa nampiasaina ka nahitana vokatsoa ihany. Ilay elanelana iray metatra koa dia zary tsy misy manaja intsony. Heverin’ny sasany fa efa levona ilay tsimok’aretina. Ny sasa tanana sy ny fitondrana aro-vava orona koa dia rariny ary mahasoa raha henjanina ny fanasaziana izay tsy mitondra azy.